Manandratra ny resadresaka amin’ny Amerikana ny mpitoraka bilaogy Jordaniana · Global Voices teny Malagasy
Manandratra ny resadresaka amin'ny Amerikana ny mpitoraka bilaogy Jordaniana
Voadika ny 03 Oktobra 2010 4:27 GMT
Vakio amin'ny teny srpski, Español, English
Manohy mandinika ny “Ground Zero Mosque” sy ny loza nitranga mikasika ny fandoroana ny korany tany Etazonia ny mpitoraka bilaogy jordaniana amin'ny alalan'ny fangatahana resadresaka amin'ny Etazonia. Miresaka mikasika ny fomba tsara indrindra mety havalin'ny Arabo sy ny Silamo ity tsy fahazoan'ny Etazonia tsara ny tena hevitry ny Silamo ity ny Jordaniana. Maro ireo mpitoraka bilaogy, toa an’ i Natasha avy ao amin'ny Mental Mayhem, no naneho tantara mikasika ireo tanora Silamo izay nametraka voninkazo teo amin'ny fiangonana iray tany Amman toy izay hamaly amin'ny fanoherana.
Ankoatr'ireo maro hafa dia nandefa ny horonantsary ahitana ny ministra avy any Columbus, OH, izay niantso mba hifankahazo sy hanana faharetana na ny Silamo na ny Kristiana i Jaraad,
Nanome tsiny ny haino aman-jery Amerikana ireto mpitoraka bilaogy ireto noho izy ireo nifantoka loatra tamin'ny sary fandranitana. Nanoratra toy izao i Natasha:
Indrisy anefa, tsy tantara izany ho an'ny haino aman-jerin'i Etazonia. Iza no hiraharaha izay firenena kely sy milamina sahala amin'i Jordania? Iza no hiraharaha izay tanora Silamo sarotiny manome voninkazo nefa ny hafa manao hetsika mahery setra? Iza amin'izy ireo no hahasarika ny sain'ny mpamaky, ny herisetra sa ny voninkazo? Indrisy, ny herisetra no nosafidian'ny haino aman-jerin'ny Etazonia. Iza moa no afaka hifaninana amin'ny fahafatesana sy ny rà? Mandresy lalandava ny tena manintona…
Ny tranga tena mandiso fanantenana dia indroa tsy nahomby tamin'ity tranga ity ny haino aman-jery Amerikana: voalohany tamin'ny namafana ny ampahan'ny tantaran'ny pretra tao Florida amin'ny alalan'ny fanomezana izany mitokana, hetsika efa narindra (izay tsy nisy akory) kokoa noho izay tena zarain'ny vaovao notaterina, ary mitondra izany ho hitan'ny mpanara-baovao eran'izao tontolo izao. Ny faharoa indray dia tamin'ny finiavana tsy te-hahalala ireo hetsika tsara nataon'ireo Silamo izay tena tokony maneho mazava tsara fa raha toa ireo Silamo sasany ka mety hoe mandoro ny sainam-pirenena sy ireo sary mitondra ny endrik'ilay firenena, misy ihany koa ny hafa, toy ity vondrona tanora Jordaniana ity, izay nanolotra voninkazo fotsiny tsotra izao.
Manoratra toy izao i Jaraad, mitanisa ihany indray an'ilay ministra avy any Ohio:
Tena marina ny azy manameloka sy manome tsiny ny haino aman-jery izay nanaparitaka tahotra tamin'ireo Amerikana.
Nefa mitaraina noho ny tsy fisian'ny fanajàna ‘ny vahoaka mpino ao anatin'ny politika Amerikana ihany koa i Jaraad. Manoratra mikasika ny resadresany tamin'i Christine O'Donnell izy, ilay antoko mpandala ny nentim-paharazana Delaware Tea Party ao amin'ny Antenimieran-doholona.
Ny fanalam-baraka ao anatin'ny horonantsary, mikasika an'i O’Donnell dia satria izy tsy nino fa ny olombelona dia ny fivoaran'ny rajako ka vendrana izy izany. Na i Bill Maher aza mba nanontany tena hoe ahoana no mahatonga ny olona hoatr'izany ho “ao amin'ny antenimieran-doholona” . Raha adika tsotsotra dia hoe, tsy azony an-tsaina mihitsy ny hoe ahoana no mahatonga ny olona iray mino an'Andriamanitra ho ao amin'ny antenimieran-doholona …Raha ny hevitry ny laika, tsy mety sady ho siantifika no hino an'Andriamanitra ianao.
Hoy i Ali mamarana hoe ny fomba tsara indrindra hiverenena dia tsy amin'ny alalan'ny haino aman-jery Amerikana, fa amin'ny alalan'ny hetsika maro miaraka amin'ny mponina Amerikana mba hanazavana amin'izy ireo ny tena fomba fihevitry ny Silamo sy ny fihetsika ataon'ny ankamaroan'ny Silamo. Niditra ho ao anatin'ny vondrona Facebook antsoina hoe Feon'ny Arabo miteny amin'ny fon'ny Amerikana (Arab Voices Speak to American Hearts) izy . Amin'ny alalan'ity vondrona ity no nanazavany ny fomba fijeriny mikasika ny Silamo sy i Jordania tamin'ny Amerikana tsirairay izay liana mafy mihitsy amin'izay ho valiny. Ho an’ i Ali, ny tanjona amin'ity fanazarana ity dia tsy ny hanome safidy ho an'ny sarin'ny haino aman-jery Amerikana. Eo andanin'izany, fomba iray hanoherana avy hatrany ny sary ratsin'ny Arabo sy ny Silamo izy ity.
Raha toa koa ianao ka mba mihevitra ny hanova an'izao tontolo izao.Ireto misy fomba tena mety izay azo anaovana an'izany. Ny ataonao fotsiny dia miresaka amina Amerikana iray ary amin'ny fombanao, dia manodina ny sainy amin'ny zavatra lazain'ny vaovao ary avy eo dia resy lahatra ianao fa mba efa toe-tsaina iray aloha izay no voaovanao farafahakeliny ary hahazo hery ianao mba hanova ny sain'ny hafa, dia toy izany hatrany.